Nangatahana i Aostralia Mba Hampitsahatra Ny Fangalarany Ny Solika Sy Ny Hoavin’i Timor Atsinanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Mey 2016 6:12 GMT
“Stencil Graffiti” nataon'i Alfe Tutuala. Sary ho an'ny sehatry ny daholobe nozarain'ny Wikimedia.
Ity dia lahatsoratra iray natonta mifototra amin'ny tantara nosoratan'i Manuel Ribeiro, ary navoaka tao amin'ny Global Voices amin'ny teny Paortigey.
Nanomboka tamin'ny 1963, voampanga ho nangalatra ny soliky ny mpifanila aminy, Timor Atsinanana, i Aostralia.
Zanatany Paortigey nandritra ny 400 taona i Timor Atsinanana. Tamin'ny 1975, nobodoan'i Indonezia izy, izay naharitra hatramin'ny 1999. Rehefa nahazo fahaleovantena izy tamin'ny 2002, nolavin'i Timor Atsinanana ny fari-dranomasina nambaran'i Aostralia izay manala ny zon'ilay firenena kely hanana fidiram-bola avy amin'ny loharanon-karenany, solika sy entona.
Nampirisika ny governemanta Aostraliana ny Governemantan'i Timor Atsinanana mba hanaiky ny fahefan'ny Fitsarana Iraisam-pirenena sy ny Fifanarahana avy amin'ny Firenena Mikambana momba ny Lalàna amin'ny Ranomasina (UNCLOS), ary mametraka ny sisintaniny eo amin'ny tsipika afovoany manasaraka ny firenena roa tonta, araka ny voalaza ao anatin'ilay lalàna iraisam-pirenena.
Voakasik'izany ny tahirin-tsolika sy entona an-dranomasina izay misy ao amin'ny faritra “Greater Sunrise”, any akaikin'i Timor Atsinanana. Hatramin'izao, tsy naneho fahavononana hamotsotra ireo loharanon-karena ireo izay tombanana ho 40 lavitrisa $ ny governemanta Aostraliana, na hiverina hankany amin'ny latabatry ny fifanakalozan-kevitra, na teo aza ny antso avy amin'ireo manampahefana Timorey.
Fa toa misokatra amin'ny làlan-kevitra mifanohitra amin'izay heverin'i Aostralia momba ny UNCLOS ny Antokon'ny Mpiasa any Aostralia. Toy izao no nambaran'ny mpitondra tenin'ny antoko, Tanya Plibersek, momba ilay olana:
Raha ny mikasika an'i Timor Atsinanana, [ny Antokon'ny Mpiasa] dia vonona ny hanaiky ny fanelanelanana tokony ho arahana izay natao tany La Haye, raha toa ka tsy ahitàna fifanarahana ny fifampiresahana ‘amin-kitsim-po’ eo amin'ny fanjakana roa. Mangataka tsy tapaka ny firenena hafa ao anaty tranonkalam-pifandraisana i Aostralia mba hanaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy handaminana ny fifanolanana amin'ny alalan'ny rafitra mifototra amin'ny fitsipika. Raha manizingizina ny tokony anarahan'ny firenen-kafa ny fitsipika isika, tokony hanaiky izany koa isika.
Vondron'ny fiarahamonim-pirenena maro ihany koa no nanao fanentanana mba hanaovana fifampidinihana indray ka hamaritana ny fari-dranomasina eo amin'i Aostralia sy Timor Atsinanana. Iray amin'ireo vondrona ireo ny Movimentu Kontra Okupasaun Tasi Timor (Hetsika Manohitra ny Fibodoana ny Ranomasin'i Timor na MKOTT), izay naorina tamin'ny taona 2004 mba hitadiavana fomba ara-dalàna sy ara-diplaomatika hamaritana ny fari-dranomasina eo amin'ny firenena roa amin'ny fomba izay mety ho marina kokoa ho an'ny roa tonta momba ny vola azo avy amin'ny solika sy ny entona.
Ny fitobian'ny solika sy ny entona rehetra hifanolanana dia any amin'ny lafin'ny tsipika afovoany an'i Timor Atsinanana izany hoe akaiky kokoa an'i #Timor noho i Aostralia
Nandritra ny fitsidihana nataon'i Peter Cosgrove, Aostraliana miaramila manamboninahitra misotro ronono, tany Timor Atsinanana ny 2 sy 3 Martsa lasa teo, nandefa antso ho an'ny fanampiany ny MKOTT mba handresy lahatra ny governemantany hampitsahatra ny ‘fikarohana’ sy ‘fitrandrahana tsy ara-dalàna’ ny harena ara-tsolika ao amin'ny Ranomasin'i Timor. I Cosgrove no Governora Jeneraly amin'izao fotoana izao, solontenan'ny fanjakana Britanika any Aostralia. Heverina ihany koa ho toy ny “naman'i” Timor Atsinanana izy satria izy no nitantana ny hery iraisam-pirenena nisahana ny fampandrian-tany, rehefa tapitra ny fibodoan'i Indonezia an'i Timor Atsinanana tamin'ny 1999.
Ity no ampahany amin'ny taratasy nataon'ny MKOTT ho an'i Cosgrove:
(…) Te hanararaotra ny fotoana hitsidihanao an'i Timor Atsinanana ny MKOTT mba hangataka anao, toy ny namana ara-tantaran'ny vahoakan'i Timor Atsinanana, mba hampiasa ny fahafahana mitarika ananao ary hangataka ny governemanta Aostraliana: 1) Hanaja ny fiandrianam-pirenena sy ny fahamendrehan'ny vahoaka ary ny firenena Timor Atsinanana, tahaka izay ataony sy efa nataon'izy ireo tamin'ny firenen-kafa. 2) Hiverina amin'ny rafitra famahana olana momba ny fari-dranomasina izay ao anatin'ny fahefan'ny Fitsarana Iraisam-pirenena sy ny Fitsarana Iraisam-pirenena momba ny Lalànan'ny Ranomasina. 3) Hifantoka amin'ny fifampiraharahana “Marina sy Misokatra” momba ny sisin-dranomasina ary tsy hamadika ny lohahevitra ao anatin'ny fifandraisana midadasika kokoa eo amin'ny roa tonta. 4) Hampitsahatra ny fampiasàn'izy ireo tohan-kevitra efa lany andro ankehitriny momba ny “Continental Shelf” (sosona kaontinantaly). 5) Hampitsahatra ny fampiasana ny fahefany ara-politika sy ara-toekarena goavana hanohizana ny fangalarana ny harenan'ny vahoakan'i Timor Atsinanana amin'izao fotoana izao sy amin'ny ho avy.
Rehefa nitsidika an'i Timor Atsinanana i Cosgrove, mba handray ny Grand Collar of the Order an'i Timor Atsinanana, ny lefitry ny CNRT Timorey (Filankevi-Pirenenan'ny Antokon'ny Fanoherana Timorey) dia namoaka fanambaràna mikasika ilay olan'ny fari-dranomasina, izay navoakan'ny gazety Aostraliana:
Nanararaotra ny fahalemen'i Timor Atsinanana i Aostralia ary ankehitriny miala amin'ny adidy tsy maintsy ataony eo anatrehan'ny sehatra iraisam-pirenena momba ilay sisin-dranomasina ifanolanana.
Ny fitrandrahana ny “Greater Sunrise”, ao amin'ny Ranomasin'i Timor
Nanomboka tamin'ny 1963 ny “fitiavan-karena tafahoatra” ho amin'ny fitrandrahana ny loharanon-karenan'i Timor Atsinanana, rehefa nomen'ny governemanta Aostraliana ny fahazoandàlana hitrandraka solika ho an'ny Woodside Petroleum, orinasa izay efa nisafo ny harena an-kibon'ny tany ao amin'ny Ranomasin'i Timor. Tamin'ny 1972, nankatoavin'i Aostralia ny fifanarahana “tena mety” niarahany tamin'ny fitondran'ny Filoha Suharto tany Indonezia, izay nahazoana “sisin-dranomasina iray mivelatra kokoa akaikin'i Indonezia,” ka nahazoany fidirana amin'ny harena an-kibon'ny tany bebe kokoa — fifanarahana izay nolavin'i Paortigaly:
Paortigaly – nitantana ny fahefan'ny mpanjanatany tany Timor Atsinanana – dia nandà tsy hiditra tamin'ilay fifampiraharahana, nisafidy ny hiandry ny dingana iraisam-pirenena izay, tamin'ny 1982, niafara tamin'ny Fifanarahan'ny Firenena Mikambana momba ny Lalàna amin'ny Ranomasina, na UNCLOS . Ny fanapahankevitr'i Paortigaly no namorona ny “Timor Gap” ao amin'ny fari-dranomasina Aostraliana-Indoneziana.
Teo anelanelan'ny 1989 sy 1999 no nitrandrahan'i Aostralia ny harena an-kibon'ny tany ambany Ranomasina an'i Timor Atsinanana “tamin'ny fomba tsy ara-dalàna nanekeny samy irery ny ‘fampidirana’ ny faritany [Timorey] ho any Indonezia sy ny tsy firaharahiany ny habibiana sy ny heloka bevava natao tamin'ny zon'olombelona,” araka ny voalaza tao amin'ny lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Global Voices, nataon'ny mpikaroka momba an'i Timor Atsinanana, Marisa Gonçalves.
Nanao sonia “fifanarahana fiarahamiasa mifototra amin'ny 50/50″ i Aostralia sy Indonezia tamin'ny 1989, mba hitrandraka ny harena an-kibon'ny tany ao amin'ny Timor Gap, fifanarahana izay nolavina sy “notoherin'i Paortigaly … tao amin'ny Fitsarana Iraisam-pirenena, nefa nifarana ilay hetsika teo anoloan'ny fandavan'i Indonezia ny hanaiky ny fahefan'ny fitsarana”, hoy ny fanazavan'i Michael Leach, mpampianatra sy mpikaroka ny politika ao amin'ny Oniversiten'i Swinburne any Melbourne.
Tamin'ny 2013, nampangain'ny governemanta Timorey ny governemanta Aostraliana ho nahazo tamin'ny fomba tsy ara-dalàna torohay tsiambaratelo mikasika ny solika sy ny entona tao anatin'ny Ranomasin'i Timor, izay “nanimba ny Timorey nandritra ny fifampiraharahana hisian'ny Fifanarahana Marimaritra Iraisana momba ny Ranomasina ao amin'ny Ranomasin'i Timor tamin'ny 2004.” Araka ny tatitra, nametraka fitaovana fihainoana an-tsokosoko tao amin'ny lapan'ny governemanta ireo Aostraliana mpitsikilo ary nampiasa izay reny ho an'ny tombontsoany tamin'ny fifampiraharahana niaraka tamin'ny governemanta Timorey.
Nikarakara andiana fihetsiketsehana izay natao tamin'ny tanàna Aostraliana maro nandritra ny herinandron'ny 21 Martsa ny “Fanentanana Timor Sea Justice“. Ho lasibatry ny fihetsiketsehana ihany koa ny masoivoho Aostraliana any Jakarta, Indonezia, ary any Dili sy Timor Atsinanana. Ny tanjona dia ny hahazo fanohanan'ny vahoaka any Aostralia amin'ny fanaovana tsindry manery ny governemanta mba handinika indray ny fitakiany momba ny ranomasina izay mifanindry ao amin'ny faritanin'i Timor Atsinanana.